Izicelo ze-iPhone | Iindaba ze-IPhone (iphepha 4)
Ukufakela i-6 ngoku iyafumaneka ngeendaba ezintsha nezibalulekileyo
Umdlali omnandi wokufaka, uza kuguqulelo 6 kunye neendaba ezintsha ezinomdla esinokuthi siqhubeke nokonwabela iimuvi zethu esizithandayo kunye noluhlu
I-Twitter ihlaziya usetyenziso lwayo olusemthethweni kunye nemowudi entsha emnyama
I-Twitter iphambi kwe-iOS 13 elandelayo esivumela ukuba sisebenzise imowudi emnyama, esiyibonileyo kuhlobo lwayo lwewebhu, usetyenziso lwayo olusemthethweni lwe-iOS.
Iindlela ezimfutshane zikaSiri zihlaziywa ukongeza imisebenzi emitsha
Isicelo seSiri Shortcuts sihlaziyiwe nje ukongeza amanqaku amatsha kunye nesicelo seNqaku.
I-beta yokuqala ye-tvOS 12.3 ngoku iyafumaneka kubaphuhlisi
I-beta yokuqala yento eza kuba luhlaziyo lwesithathu olukhulu lwe-tvOS 12, ngoku iyafumaneka, nangona okwangoku kuphela kubaphuhlisi
I-Apple ivuselela uyilo lwe icon yeapp yeApple TV
Abafana abavela eCupertino bahlaziya uyilo lweapp yeApple TV ngokutshintsha i icon yayo kunye noyilo lolawulo lomzimba lweApple TV.
I-Fortnite yenza amandla kwakhona okuxoxa ngelizwi kwi-iOS kuhlaziyo lwayo lwamva nje
Uhlaziyo lwamva nje lwe-Fortnite ekugqibeleni lwenza ukuba incoko yelizwi ikhuphe kwi-iOS, ukongeza ukongeza izinto ezintsha ukubuyisela impilo.
I-Telegram ihlaziywa ukuze ihambelane ne-VoiceOver ngaphezu kokungeza imisebenzi emitsha
Uhlaziyo olutsha lweTelegram lusivumela ukuba sisuse iincoko kwincoko yabucala kwaye songeze ukuhambelana neVoiceOver
Chicotaz, khokela indlela yakho yePasika kulo mdlalo
I-Ista ikufuphi kwikona, kwabaninzi lelinye nje ixesha leholide kunye ...
I-Twitter iya kongeza inkxaso ekwabelaneni nasekujongeni iiFoto eziBukhoma kwi-iOS
Ikhowudi yesicelo se-Twitter ye-iOS ibandakanya ukhetho lokukwazi ukwabelana ngeefoto eziBukhoma ngqo eqongeni, nangona ingekho ngalo mzuzu.
Ijenali yeWall Street ibonakala ngathi ixabise isivumelwano ukuba sifumaneke kwiApple News
Ngomvulo olandelayo, ngokwamarhe onke esiwapapashileyo kwezi veki zidlulileyo, ndabona ...
Ngoku unoku-odola iintaka ezinomsindo: Isle of Pigs, ikamva leNene eliNgezelelweyo
URovio unesibindi ngokwenyani esandisiweyo ngokusungula iintaka ezinomsindo: Isle of Pigs, sinokuyigcina ngoku ukuba sibe nayo ngo-Epreli 11 olandelayo.
Spotify uphendula rhabaxa kuApple
Ubundlongondlongo phakathi kweSpotify kunye neApple, babenesiqendu esitsha kwimpendulo eyabhengezwa yinkampani yaseSweden kwingxelo yakutshanje evela kuApple
I-Shazam ihlaziywa ukongeza ulwazi oluthe kratya lwethegi
Xa kuziwa ekwazini ukuba yeyiphi ingoma edlalayo, kwiVenkile ye App sinezixhobo ezahlukeneyo ...
IGboard isinika umsebenzi wokuguqulela kuhlaziyo lwamva nje
Uhlelo lokusebenza lweGboard luhlaziyiwe nje ukongeza umguquli owakhelwe kwi-keyboard ye-iOS.
Ukubuyela kuka-Fortnite ukunika umsitho "Ubaleke" okwexeshana
Imidlalo ye-Epic ihlaziye ngokutsha, kwakhona, i-Fortnite yokongeza umsitho womdlalo omtsha obizwa ngokuba yi-Escape, apho sinokugqiba imiceli mngeni eyahlukeneyo
I-Google Drayivu ihlaziywa ngokudibanisa uyilo, olusebenzayo ngakumbi
Uhlelo lokusebenza lweGoogle Drayivu luhlaziyiwe ukubonisa uyilo olutsha ngokuhambelana noko kusetyenziswa nguGoogle kwiG Suite.
U-Spotify uyadinwa kwaye ufuna iKhomishini yaseYurophu iphande i-Apple ngokuchasene nokhuphiswano
Abafana eSpotify badiniwe zizenzo zika-Apple basandula ukukhalaza kwiKhomishini yaseYurophu ukubeka oomatshini bokulwa ukhuphiswano basebenze.
I-Twttr yinkqubo entsha yovavanyo lwe-Twitter
I-Twitter, inethiwekhi yoluntu, ikhangele iminyaka eliqela ukuphucula kunye nokwenza imisebenzi emitsha, kwaye uninzi alugqibanga ukwanelisa ...
Isithuthi esitsha, i-boloncho kunye neopopayi ezintsha zivela kwisandla sohlaziyo lwe-Fortnite
Imidlalo ye-Epic siye sasebenzisa ukumilisela phantse veki nganye ngoyena mdlalo uphumeleleyo, iFortnite, ...
Ukuvuza kweNiantic iinkcukacha zokuqala zeHarry Potter Wizards Unite, umdlalo omtsha wenyani wePokémon GO
Abafana baseNiantic babhengeza ukuba iHarry Potter Wizards Unite izakufika kulo nyaka we-2019 ngemowudi yemidlalo yokwenyani eyongeziweyo.
Imowudi emnyama iza ngokusemthethweni kwi-Slack app
Isicelo semiyalezo yeenkampani, i-Slack, sele ihlaziywa nje yongeza indlela elindelekileyo yentlalo ehambelana nezikrini ze-OLED.
INintendo ayifuni ukuba imidlalo yayo ikhohlise abadlali ngokuthenga ngaphakathi nohlelo
I-Nintendo ixoxisana nabanye abaphuhlisi uhlobo lokuthenga kwangaphakathi nohlelo olunikezelayo ukuze kungonakalisi umfanekiso walo kubadlali.
I-Evoland 2 ifumaneka nge-1 euro kwiVenkile ye App
Ngexesha elincinci unokufumana isihloko esimnandi se-Evoland 2, esinexabiso eliqhelekileyo li-euro ezingama-7,99, kodwa okwangoku yeyoku-1 euro kuphela.
UCastro uhlaziywa ngokongeza icandelo elitsha elinomxholo okhethiweyo
Umxhasi weCastro podcast usandula kuhlaziywa ngokongeza ithebhu entsha, ukuFumanisa, apho siza kufumana umxholo okhethiweyo veki nganye
Ityala lolwaphulo-mthetho: Iyelenqe, umdlalo olula wokuxhoma kunye
Imidlalo yokukhangela ixhaphake kakhulu kunokuba sinokucinga, kwaye nangona sinabasebenzisi ...
Ungazifumana njani izicelo ezintsha ngaphakathi Ivenkile yeeVenkile?
Sabelana ngesiqulatho neApple mihla le ukuze sinikwe izicelo ezenzelwe wena zokusebenzisa izixhobo zethu zemihla ngemihla.
I-beta yokuqala yeSwitf Playgrounds 3.0 ngoku iyafumaneka
I-Apple yenza ukuba kufumaneke kubasebenzisi be-TestFlight ibeta yokuqala yesicelo kwinkqubo ye-Swift Playgournds 3.0 yezicelo kunye nemidlalo
Iimephu zobuncwane ngoku ziyafumaneka kuhlaziyo lwamva nje lweFortnite
Iimephu zobuncwane ezazithenjiswe yiMidlalo ye-Epic ngeFortnite ngoku ziyafumaneka kuthi ukuba sizikhangele kwaye sifumane izinto eziyimbali
IMicrosoft Edge ye-iOS isivumela ukuba siguqulele ngokwendalo amaphepha ewebhu
Inguqulelo yeMicrosoft Edge yezixhobo ze-Apple ezilawulwa yi-iOS, ekugqibeleni zisinika ithuba lokuguqula amaphepha ewebhu ngaphandle kokuwushiya.
Omnye umba wabucala we-Facebook ovumela ukuba ukhangele ngenombolo yefowuni
I-Facebook, njengolunye usetyenziso kunye neenkonzo, kwakudala zongeze ukungqinisisa kwezinto ezimbini kusetyenziswa inombolo yefowuni ...
I-Apple izakuqala ukukhangela into esiyithethayo ngeSiri kwiinethiwekhi zentlalo
USiri, umncedisi ka-Apple obenathi phantse iminyaka esi-8, lelinye lawona manqaku abuthathaka ...
Isicelo se-GIPHY sisivumela ukuba singene kwii-GIF zethu kwaye senze ezitsha ezivela kwiMiyalezo yesicelo
Isicelo seGHIPY sihlaziyiwe ukuphucula ukusebenza kunye nokuhamba phakathi kwe-GIFS esinokuyithumela ngokusebenzisa iMiyalezo yesicelo.
Uyithandile iLimbo? I-Microbian yeyona ndlela inomtsalane
Microbian, umdlalo waseSpain oyenye indlela ecacileyo yeLimbo malunga noyilo kunye nokuseta. Fumanisa umdlalo okhawulezayo nathi.
I-Apple icacisa utshintsho kwiimfuno zemethadatha zeepodcasts
U-Apple uphinde walungisa kwaye walungisa ezinye zotshintsho ebezicebise kwangoko kule veki.
I-Soor, umdlali omtsha we-Apple Music kunye nemisebenzi enomdla
I-Apple Music idityaniswe kwi-app yoMculo kwizixhobo zethu nakwi-iTunes, ezinye esele zaziwa, kodwa akukho ...
Iindlela ezimfutshane zikaSiri zandisa inani leeapps ezizixhasayo
USiri uhlaziye nje iindlela ezimfutshane zeSiri ukuze zihambelane neapps ezintsha ezinje ngeAmerican Airlines, Caviar, Dexcom, Merrian Dictionary Dictionary, kunye neSpecter.
Ixesha le-8th le-Fortnite lifika linempawu ezininzi ezintsha
Ixesha le-Fortnite 8 ngoku liyafumaneka kuzo zonke izixhobo ezixhaswayo. Kule nqaku sikubonisa ezona ndaba ziphambili zisinika zona.
I-iPhone XS Max vs Samsung Galaxy S10 +: uvavanyo lwesantya
Sikubonisa uvavanyo olukhawulezayo olutsha apho sibona ukuba zombini i-S10 + kunye ne-iPhone XS Max zisinika ukusebenza ngokufanayo.
I-Citymapper yenza ubhaliso lokuqala lwezothutho
I-Citymapper iyaqhubeka ukuba yenye yezonaapps zaziwayo kwizixeko ezikhulu ezinjengeMadrid okanye iBarcelona ngenxa yolwazi ke ...
I-EMT yaseMadrid ihlaziya iapp yayo kwaye ekugqibeleni iyayiqhelanisa namaxesha amatsha
Ngoku isicelo se-EMT Madrid sihlaziyiwe kwiscreen se-iPhone X kwaye sihlaziye ujongano lomsebenzisi ngokupheleleyo.
Iimaphu zikaGoogle zongeza ukhetho ku "Landela" iindawo kunye namashishini
Iimaphu zikaGoogle ziqalisile ukwazisa ngesixhobo esithi "Landela" kwi-iOS apho sinokufumana khona uhlaziyo kwiindawo zethu esizithandayo
Uhlaziyo lukaApple Shazam ngokususa ii-SDKs zomntu wesithathu
Abafana abavela eCupertino benza olona tshintsho lubaluleke kakhulu ngaphakathi kweShazam: ukuphelisa ii-SDKs zomntu wesithathu, kungasathengiswa idatha yethu.
I-Bnext ibhiyozela abasebenzisi abayi-100.000 ngokufaka izinto ezimbini ezintsha
I-Bnext isandula ukwazisa izinto ezimbini ezintsha kwiqonga layo ukubhiyozela isikhumbuzo sonyaka omnye wokumiliselwa kwayo. Sukuphoswa yiyo.
Ukulala ngokuzenzekelayo kuzongeza ipaneli yanamhlanje apho sinokubona isishwankathelo sokulala kwethu
I-AutoSleep yongeza iphaneli yanamhlanje ngendlela esulungekileyo yeMpilo yeApple ukusinika yonke idatha yokulala kwethu ngendlela elula.
Ibhodi yeHovercraft, iDriftboard, ngoku iyafumaneka kwiFortnite ixesha elincinci
Ibhodi ye-hovercraft ye-Fortnite, i-driftboard, ngoku iyafumaneka kwi-PVP kunye nemowudi yemidlalo ye-MTL.
Ungalifumana njani ixesha le-8th le-Fortnite simahla
Ukubhiyozela uSuku lweValentine, iiMidlalo ze-Epic zisinika uthotho lwemiceli mngeni yokufumana idabi ledabi le-8 simahla.
I-Apple inyanzela abaphuhlisi ukuba basebenzise ukungqinisisa kwezinto ezimbini ngaphambi kokuphela kwenyanga
U-Apple uthumele i-imeyile kubaphuhlisi ebabongoza ukuba basebenzise amanyathelo amabini okuqinisekisa kwiiakhawunti zabo ngaphambi kukaFebruwari 27.
Iiplanethi ze-Fortnite kunye neelay zip zifumana utshintsho kuhlaziyo olutsha
Uhlaziyo lwe-Fortnite 7.40 lusinika iindlela ezintsha zokunxibelelana nolwakhiwo xa sihamba ngenqwelomoya kunye nemigca ye-zip
IPixelmator ihlaziywa ixhasa i-iPad Pro kunye "nokucinezela kabini" kwePensile ye-Apple
IPixelmator inguqulelo 2.4.4 ngoku iyafumaneka. Olu khululo longeza inkxaso kwi-Pro Pro entsha kunye nePensile ka-Apple "yokuthinta kabini".
Umndilili wenkcitho kwiVenkile ye App ngo-2018 yayingu- $ 79
Umndilili wenkcitho ngabasebenzisi baseMelika kwiVenkile yeVenkile ngo-2018 yafikelela kwi- $ 79, emele ukwanda kwama-36% xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo
Nge-iOS 12.2, ukhetho "lokumakisha njengoko kudlalwe" luya kubuya ngaphakathi kwesicelo sePodcast
Isicelo sePodcast siza kongeza inqaku elitsha kwi-iOS 12.2 ebelifumaneka kwiinguqulelo ezidlulileyo.
Ukukhuphela ngokuzenzekelayo kwezixhobo ezitsha zeNetflix ngoku kuyafumaneka ngokusemthethweni
Isicelo seNetflix se-iOS sihlaziyiwe nje esenza ukuba inqaku elitsha livumele umxholo ukuba ukhutshelwe ngokukrelekrele. Sichaza ukuba isebenza njani.
Uyifumana njani kwaye uyicime njani i-WhatsApp engeyonyani okanye ekhohlakeleyo
Iqonga lokuthumela imiyalezo likwabelane esidlangalaleni ngezixhobo ezizisebenzisayo ukufumana iiakhawunti ezinobungozi okanye ezinokusetyenziselwa ugaxekile.
Iirokethi zepyrotechnic kunye neebhonfires ezingqonge ezona zinto ziphambili zohlaziyo lwamva nje lweFortnite
Imijukujelwa yePyrotechnic kunye nemililo yemo engqongileyo zezona zinto ziphambili zohlaziyo lwamva nje lweFortnite
I-Gmail ye-iOS ngoku iyahambelana nePad Pro 2018
Isicelo seGmail sihlaziyiwe ukuze ekugqibeleni sihambelane neefomathi zescreen esitsha se-11 kunye ne-12,9-intshi iPad Pro.
Inkqubo yeAmazon Prime yeVidiyo yeApple TV ngoku ixhasa umsebenzi weX-Ray
Isicelo seAmazon Prime seVidiyo yeApple TV ekugqibeleni iyahambelana nomsebenzi weX-Ray wale nkonzo, umsebenzi onika ukufikelela kulwazi lwe-IMBD kuthotho okanye kumdlalo bhanyabhanya
I-WhatsApp ihlaziywa kwaye ixhasa i-ID yobuso
I-WhatsApp sele ikuvumela ukuba usebenzise iFaceID ukufikelela kwisicelo. Sichaza indlela yokwenza lo msebenzi ukuze kungabikho mntu ubona imiyalezo yakho ngaphandle kwemvume
Isicelo seFacebook ngoku sixhasa isisombululo sezikrini ze-iPhone XS Max kunye ne-iPhone XR
Kwiinyanga ezininzi emva kokumiliselwa, usetyenziso lwe-Facebook luye lwahlaziywa ukuxhasa isisombululo se-iPhone XR kunye ne-iPhone XS Max.
UGqirha Mario World uyeza kwi-iOS ekuqaleni kwehlobo
UNintendo usandula ukubhengeza ukumiliselwa komdlalo wevidiyo omtsha kumaqonga eselfowuni abizwa ngokuba nguGqirha Mario World, umdlalo oza kufika kweli hlobo
INintendo ibanga ukulibaziseka kwiMario Kart ye-iPhone, ixesha lokulinda
Ngokwimithombo ekufutshane neNintendo, uMario Kart we-iOS uza kuva ubunzima bokulibaziseka okungalindelekanga nokungapheliyo ukufika kwakhe kwiVenkile yeApple.
Rekhoda kwiVenkile ye App: ababhekisi phambili babenokwenza i-120 yezigidigidi zeedola ukusukela ngo-2008
Abafana abavela eCupertino babhengeza izibonelelo abazixelile kubaphuhlisi enkosi kwimali engenayo yeVenkile ye App: i-120 yezigidigidi zeedola.
Isicelo seNkxaso yeApple sihlaziywa ngokongeza ibar yokukhangela entsha
Isicelo seNkxaso yeApple sihlaziyiwe ngokongeza ithebhu yokukhangela entsha esivumela ukuba sifumane amanqaku asithandayo.
Uhlaziyo luka-Apple Izikhokelo zoPhuculo zokuKhusela ukuKopa ngokuBhalisa
Abafana eApple bahlaziye izikhokelo ekufuneka zilandelwe ngabaphuhlisi ukuze babhalisele kwizicelo zabo.
I-Fortnite ye-iOS ngoku iyahambelana nabalawuli be-MFI kodwa hayi nge-Apple TV
Uhlaziyo lwamva nje lweFortnite longeze inkxaso kubalawuli be-MFI njengeNinbus 'SteelSeries, kodwa hayi iApple TV.
Inguqulelo ye-beta ye-iOS 12.2 iqinisekisa ukufika kwee-AirPods 2
Enkosi kubaphuhlisi, ukufika kuka "Hey Siri" kwii-AirPod kufunyenwe kwi-beta 1 ye-iOS 12.2, eqinisekisa inguqulelo entsha
Iindaba zeApple ziza eCanada ngokukhutshwa kwe-iOS 12.2
Ngokukhutshwa kwe-iOS 12.2 kwi-beta yayo yokuqala, usetyenziso lweApple News luyafumaneka eCanada.
I-Telegram ihlaziywa ukuphucula amaqela kwaye ivumela ukuba sicime iingxoxo ezicinyiweyo
Esona sicelo somyalezo sisetyenzisiweyo kwihlabathi, i-WhatsApp ayibonakali inomdla omkhulu ekuphuculeni ...
IiGoodNotes 5 zihlaziywa simahla ngoyilo loyilo kwakhona
Abafana baseGoodNotes bahlaziya usetyenziso lwabo kuhlobo lwesihlanu kuyilo olutsha, sinokulufumana ngoku simahla ukuba sineeGoodNotes 4.
Ezi ziindaba eziya kufika kuhlaziyo olulandelayo lwePUBG Mobile
Ukuba ufuna ukwazi ukuba zithini iindaba ezithi zisiziswe yiPUBG Mobile 10.5, emva koko sikubonisa zonke iinkcukacha.
Ukuphinda kusebenze kwakhona kwi-delta ephezulu kubuyile eFortnite kunye nekhawuntara yokusetyenziswa
Kwiiveki ezimbalwa emva kokugcinwa kwindawo yokugcina izinto yeMidlalo ye-Epic, ukuphinda usasazwe kwakhona kwishellider iyafumaneka kwakhona kodwa kuthintelwe inani elithile.
Yintoni esinokuyenza ngeTV ehambelana neKhayaKit
Kuwo wonke lo nyaka iimodeli ezintsha zeethelevishini ezihambelana ne-AirPlay 2 kunye neKhayaKit ziya kuphehlelelwa. Kule nqaku sikubonisa ukuba yintoni esiya kuba nakho ukuyenza ngokuhambelana
I-Adobe Lightroom CC yongeza inkxaso kwizicelo zeendlela ezimfutshane
Isicelo samva nje esihlaziyiweyo ukuze sihambelane nesicelo esifutshane se-iOS 12 yiAdobe Lightroom eyongeza into enemveliso kakhulu.
I-Plex ifuna ukufumana intengiso ngokunikezela ngeemovie kunye nothotho ngeentengiso zezixhobo zethu
Abafana basePlex baya kuba becinga ngokuguqula intengiso yevidiyo ngokusasaza iifilimu kunye nothotho simahla ngentengiso.
UKenwood wazisa ngeNgcaciso eNtsha yezixhobo zeCarPlay ezingenazingcingo
Umvelisi uKenwood uveze izixhobo zeCES 2019 ezisixhenxe ezihambelana neCarPlay ngaphandle kwentambo.
INintendo yenze i-348 yezigidi zeedola ngo-2018 ngemidlalo yeselfowuni
Umdlalo wevidiyo omkhulu weNintendo uvelise i-348 yezigidi zeedola kwimidlalo yayo kumaqonga eselfowuni.
Ukulala ngokuzenzekelayo kuqalisa uyilo olutsha kunye nokuhambelana neendlela ezimfutshane zikaSiri
Uhlaziyo olutsha lwe-AutoSleep luzisa uninzi lweempawu ezintsha, ezinje ngokuhlengahlengisa ujongano okanye "ucoceko" kunye "nemisebenzi yokulala yeBhanki".
I-Pandora isungula usetyenziso lwayo kwiApple Watch evumela ukhuphelo lweengoma
Abaphuhlisi benkonzo yokusasaza umculo uPandora bahlaziya usetyenziso lwabo ngenguqulelo entsha yeApple Watch kunye nemowudi yokudlala ngaphandle kweintanethi
I-Apple kwi-tightrope iyaqhubeka nokophula iirekhodi: Ivenkile yeeVenkile ivelise i-322 yezigidi zeedola kunyaka omtsha
Emva kweendaba ezimbi kwintengiso yesitokhwe yabafana baseCupertino, babhengeze ukuba iintsuku zeKrisimesi kunye noMnyaka oMtsha zaphule irekhodi lomvuzo kwiVenkile yeApple.
Unyaka woMculo kuVavanyo, isishwankathelo somsebenzi wakho weApple Music ngo-2018
UAlex Santarelli upapashe uNyaka woMculo kuVavanyo, usetyenziso olunika ababhalisi boMculo weApple amandla okwenza isishwankathelo somsebenzi.
Ezona zixhobo zibalaseleyo ze-iOS zika-2018
Siphelisa unyaka ngokukhetha ezona zicelo zibalaseleyo ze-2018 esinokuzifaka kwi-iPhone yethu, kwi-iPad nakwi-Apple Watch.
INetflix ayisavumeli ikhontrakthi ngenkonzo yayo ngokusebenzisa i-iOS
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, sive intshukumo eyayisenziwa yiNetflix inxulumene nemirhumo ...
Imidlalo ye-Epic ibinokwenza i-3.000 yezigidigidi zeedola ngo-2018 ngenxa ye-Fortnite
Imidlalo ye-Epic, enkosi ku-Fortnite, iye yaba ngumatshini omkhulu wokwenza imali kwaye yafumana ngaphezulu kwe-3.000 yezigidi zeedola zenzuzo kwi-2018
IAlto's Adventure kunye neAlto's Odyssey iyafumaneka nge-0,49 euro
U-Snowman, umphuhlisi weAlto's Adventure kunye neOdyssey, wehlise ixabiso lemidlalo yomibini ukuya kwi-euro ezingama-0,49, isithembiso esingenakuphoswa.
Eyona midlalo ilungileyo ye-iOS ngo-2018
Kuyo yonke i-2018, imidlalo emininzi emitsha ifikile kwiVenkile ye App. Kule nqaku sikubonisa ukuba yeyiphi eyona midlalo ilungileyo efikelele kwiVenkile ye App ngo-2018
Impucuko VI inika ubuhle kunye nempucuko yeKrisimesi
Kwiintsuku ezimbalwa, abaphuhlisi be-VI benza iimeko ezahlukeneyo kunye nempucuko ifumaneke kuthi simahla.
Le yeyona midlalo mihlanu ilungileyo inyanisekileyo kwiVenkile ye App
Ngaba unayo isixhobo se-iOS? Ngaba uyafuna ukonwabela eyona midlalo ingathandabuzekiyo? Le yeyona midlalo mihlanu mihle uyonwabileyo.
Olona suku lubaluleke kakhulu kwinkampani yeWaze: Usuku lukaTim Cook
Abafana baseWaze baqinisekisa ukuba loluphi olona suku lubalulekileyo kwinkampani: umhla kaTim Cook, usuku u-Apple azibona ngalo iingxaki ze-Apple Maps
I-PlayStation isungula i-Lemmings eyindumasi ye-iOS simahla
I-PlayStation iyamangalisa kwaye isungula umdlalo odumileyo we-Lemmings kwi-iPhone kunye ne-iPad yethu. Umdlalo esinokonwabela kubo bonke ubungangamsha bawo simahla.
Iikhalenda 5 kwimeko apho ihlaziywa khona ukuze ihambelane neApple Watch
Iikhalenda zomphathi wekhalenda 5 zisandula ukufumana olunye uhlaziyo olulindelwe ngabasebenzisi abaninzi: ukuhambelana neApple Watch kunye neendlela ezimfutshane zikaSiri
Ivenkile esemthethweni yeFortnite ivula iingcango zayo
Imidlalo ye-Epic isandula ukuvula ivenkile yaseFortite, apho sinokufumana khona iimpahla ezisemthethweni zomdlalo wevidiyo ofanelekileyo kulo nyaka.
I-Facebook iya kuba ilungiselela eyayo imali eyi-cryptocurrency yokuyisebenzisa nge-WhatsApp
Ngokwedatha evela eBloomberg, abafana abavela kuFacebook bacinga ngokusungula eyabo imali eyi-cryptocurrency eza kusetyenziswa kuWhatsApp kwimicropayments.
USphero uyeke ukuvelisa i-BB-8 kunye ne-R2-D2 ekupheleni kwesivumelwano kunye neDisney
Umvelisi uSphero, usandula ukubhengeza ukuba umanyano neDisney luphelile kwaye uyekile ukuthengisa iimveliso asinike zona iminyaka eliqela.
I-Twitter ekugqibeleni iyasivumela ukuba sihlele ii-tweets ngokulandelelana kwazo. Sikubonisa ukuba ungayenza njani
I-Twitter isebenze nje iqhosha elitsha kwisicelo se-Twitter se-iOS esivumela ukuba sihlele ngokulula ii-tweets ngokulandelelana kwazo.
I-PES 2019 yongeza iiligi ezintsha ze-12 kwaye isebenzisa i-Inreal yeNjini ye-4 yemizobo
Umdlalo webhola ekhatywayo i-PES 2019 ngoku iyafumaneka ngokongeza iiligi ezili-12 kunye nokusebenzisa i-Epic Games 'Injini ye-Injini yemizobo.
I-PUBG uhlaziyo lweselfowuni ukulungiselela ukufika kwemephu entsha enekhephu: Vikendi
Uhlaziyo ekudala lulindelwe lwe-PUBG olunikezelwa yimephu entsha enekhephu, iVikendi, ngoku iyafumaneka, nangona imephu ingazukufumaneka ezinye iintsuku ezimbini.
UApple ususa uhlaziyo lwe-Shazam kuhlaziyo olutsha
Emva kokuthengwa kwenkampani ngabafana baseCupertino, uApple ugqiba kwelokuba asuse lonke ugcino kwintengiso ye-Shazam kuzo zonke iinguqulelo zayo.
Ungalongeza njani ibhukumaka kwiChannel ukusuka kwiSafari kwi-iOS
Ukongeza ibhukumaka kwisikhangeli seGoogle Chrome esivela eSafari yinkqubo elula kakhulu ukuba sinenkcaza engezantsi kwaye iya kusivumela ukuba songe ixesha.
Indlela yokubhala inqaku kwiscreen se-iPhone yethu okanye i-iPad
Kweli nqaku sikubonisa ukuba singongeza njani inqaku kwisicelo seNqaku ukusuka kwiscreen se-iPhone yethu okanye i-iPad
Kwenzeka ntoni yonke imizuzu kwiVenkile yeApple?
I-Apple ipapashe namhlanje kwicandelo layo "Namhlanje" leVenkile ye App App inqaku elinomdla malunga nokwenzekayo kwi ...
I-Apple isusa umsebenzi woQhagamshelo kubazobi ngaphakathi kweApple Music
Inethiwekhi yentlalo eyenziwe yiApple kubazobi ngeApple Music, Connect, ayisasebenzi kwaye wonke umxholo opapashiweyo ukuza kuthi ga ngoku uya kususwa ngoMeyi 24, 2019.
IMacTracker ihlaziywa ngokongeza i-iPhone kunye ne-iPad yamva nje ngo-2018
Isicelo seMactracker sihlaziyiwe songeza zonke iimveliso ezintsha ezikhutshwe yinkampani esekwe kwiCupertino kwintengiso.
IKrisimesi ifikile kumdlalo weNduli yokuKhwela i-2
I-PlayStation App ihlaziywa ngezibonelelo ezenzelwe wena
Sifumene uhlaziyo olutsha kwi-PlayStation App eya kuthi, phakathi kwezinye izinto, isivumele ukuba sisebenzise izibonelelo ezenzelwe wena kuqeqesho lwethu.
I-Algoriddim isungula i-Djay entsha ye-iOS ikhululeka ngemowudi yokuhlawula
Abafana abavela eAlgoriddim batshintsha imodeli yeshishini likaDjay ngokuyenza ukuba ibe simahla ngaphandle kokuthintela imisebenzi yayo kakhulu, ewe, kukho nenguqulelo ehlawulwayo.
I-Asphalt 9 sele isivumele ukuba sidlale kwii-60 fps nge-iPhone XS kunye ne-iPhone XR
Uhlaziyo lwamva nje lwe-Asphalt 9, lusinika njengeyona nto intsha inokubakho yokonwabela umdlalo kwi-60 fps
Uhlaziyo lwamva nje oluvela eGiphy ludityaniswa nekhamera ye-TrueDepth ukwenza izitikha zesiko kwaye yongeza ikhibhodi kwakhona
Inkqubo ye-Giphy ye-iOS ihlaziyiwe nje ukongeza inkxaso kwikhibhodi kwi-iOS 12 kunye nokudityaniswa kwekhamera eyiyo yeNzulu ye-iPhones.
I-Coomand kunye ne-Conquer Rivals, umdlalo wevidiyo esinokuthi siphucule kuwo izakhono zethu kwinqanaba lobuchule kunye nohlelo olutsha lweklasikhi.
Iilensi zikaGoogle zihlala ngokusemthethweni kwi-iOS
Olu buchule lubizwa ngokuba yiGoogle Lens belungafumaneki kwi-iOS kude kube ngoku, esele ikhutshiwe ngokusetyenziswa kwayo ngokusemthethweni.
Imidlalo ye-Epic isusa i-infinity Blade trilogy kwiVenkile ye App
Imidlalo ye-Epic irhoxile kwivenkile yesicelo sika-Apple, isaga se-Infinity Blade, kuba ayinakukubonelela ngenkxaso ebanga ukuba, le saga kufuneka iyifumane.
IAmazon ihlaziya iAkiel ngeendlela ezinendawo kunye nezikhumbuzo, kunye nenkxaso ye-imeyile
Abafana abavela eAmazon benza i-geolocation kuzo zonke izixhobo ezine-Alexa ukuze umncedisi asebenzisane nendawo yethu.
INetflix iya kuvelisa isixa esikhulu semali enkosi ngenxa ye-iOS
Iindaba ziyavuza ukuba iNetflix ibizakufumana i-47% ngaphezulu kwingeniso ngokusebenzisa usetyenziso lweselfowuni ngokuthelekiswa nonyaka ophelileyo.
Iindawo zokudlala zeLego zeAR ngoku ziyafumaneka kwiVenkile ye App
Inqaku le-LEGO eliNgezelelweyo ngoku liyafumaneka kwi-iPhone nge-LEGO Playgrounds AR
Iindlela ezimfutshane zihlaziywa ngokongeza iPost kwi-Tumblr isenzo kunye nokulungisa ezininzi iibhugi
Inkqubo yee-Shortcuts isandula ukufumana uhlaziyo olutsha olungisa inani elikhulu leebugs kwaye yongeza iPosti kwiTumblr isenzo
Ixesha le-7 liza kwi-Fortnite ivumela i-iPad Pro 2018 ukuba idlale kwi-60 fps
Ngokufika kwexesha le-7, i-Fortnite ye-iOS sele isivumele ukuba sidlale kwi-60 fps kwi-iPad Pro, into esinokuyenza kakade nge-iPhone XR, i-iPhone XS kunye ne-iPhone XS Max
I-Calcbot ye-iOS ihlaziywa ngokubuyela kwi-Apple Watch
Abafana kwiTapbots bahlaziya i-Calcbot yokubala i-app ukuyibuyisela kwi-Apple Watch emva kokufika kwe-Apple Watch Series 4 entsha.
Ungakukhubaza njani ukudlala ngokuzenzekelayo kweevidiyo kwithebhu yasekhaya ye-Youtube
Ukungabhalisi ukudlala ngokuzenzekelayo kweevidiyo kwiYouTube yinkqubo elula kakhulu ukuba sinenkcukacha kweli nqaku.
I-Apple ibhengeza eyona App kunye noMdlalo oBalaseleyo woNyaka ka-2018, kunye nezinye iiHits
Apha sikubonisa owona mdlalo ubalaseleyo, esona sicelo, eyona albhamu, ezona bhanyabhanya zikhutshelweyo ... ezivela kwiApple ngo-2018
I-Apple ithintela ukuthengiswa kwe-iPhone ekubeni kuthintelwe e-India, kuvumela usetyenziso oluthintela i-SPAM yefowuni
U-Apple uthintele ukuthengiswa kwe-iPhone ekubeni kuthintelwe e-India ngokuvumela i-app ukuba ibhlokise iinombolo ze-SPAM ekubeni zisungulwe kwiVenkile ye App.
Ukuhanjiswa kongeza inkxaso kwiindlela ezimfutshane zikaSiri
Ngoku singabuza uSiri, umzekelo, xa ukuthunyelwa kwethu okulandelayo kuza kufika kubulela ukuHanjiswa kwe-iPhone yethu
I-Socratic iya kuwenza umsebenzi wakho wesikolo ngaphandle kokuchitha ixesha
I-Socrate sisicelo esiza kukuvumela ukuba wenze imisebenzi yezibalo kunye naluphi na uhlobo lwefomula ngaphandle kwengxaki.
I-Fortnite ye-iOS ihlaziywa kwaye ivumela ukuba sidlale kwi-60 fps
Uhlaziyo lwamva nje lweFortnite lusinika njengeyona nto iphambili kunye nokutsha kuphela ngaphakathi kwenkqubo ye-iOS, ithuba lokudlala ukuya kuthi ga kwi-60 fps
I-YouTube Music Premium kunye ne-YouTube Premium sele zinezicwangciso zabafundi
Inkonzo yokusasaza umculo kaGoogle isandula ukumisela izicwangciso ezitsha zabafundi, izicwangciso ezinikezela ngesaphulelo se-50%
I-Pluszle, umdlalo wokulutha oza kuthi usebenze ngawo izibalo zengqondo
Umdlalo akufuneki wonwabise kuphela. I-Pluszle ngumxube phakathi komlutha, ulonwabo kunye nophuhliso lwezibalo zengqondo, umxube ogqibeleleyo.
I-Kingdom Rush Impindezelo, eyona nkqubo yoKhuselo ilungileyo ibuyayo
Enye yezona ndawo zibalaseleyo zokukhusela inqaba ibuya nesavenge esitsha esigcina bonke ubuhle kunye nezinto ezintsha onokukhetha kuzo.
Umdyarho we-CSR 2 usivumela ukuba sibuyisele kwaye sikhuphisane nezithuthi zakudala emva kohlaziyo lokugqibela
Umdlalo wokubaleka we-CSR racing 2 sele uhlaziyiwe ukongeza izinto ezimbini ezintsha ezenza olu hlaziyo lubaluleke kakhulu ukuza kuthi ga ngoku.
I-Alto's Odyssey iyafumaneka ngesaphulelo sama-40% usebenzisa uLwesihlanu omnyama
NgoLwesihlanu omnyama ikwafumaneka kwiVenkile ye App apho sinokufumana umdlalo omnandi weAlto's Odyssey ngesaphulelo sama-40%.
I-Instagram iya kwenza utshintsho kumsebenzisi ukuze yenze kube lula ukuyisebenzisa
Intlalontle oyithandayo yeebhiliyoni zabasebenzisi, i-Instagram, iya kufumana utshintsho kwinqanaba lomdibaniso kwiiveki ezizayo
Imizobo yenqanaba leConsole iza kwi-NBA 2K ilungele iPad Pro entsha
I-NBA 2K entsha ilapha ngePad Pro entsha, umdlalo wokuqala osizisela imizobo yekhonsoli kwisixhobo esiphathwayo seCupertino.
Imvukelo ka-Assassin's Creed ngoku iyafumaneka kwiVenkile ye App
I-saga ye-Assassin's Creed iye yaba yiklasikhi kwihlabathi lemidlalo yevidiyo, ekwenzileyo ...
I-Netflix ye-iOS ihlaziywa ngomdlali omtsha kuthotho lwayo kunye neemovie
INetflix ihlaziye nje iapps yayo yokuphucula i-iOS ukuze kube lula ukonwabela umxholo wekhathalogu yayo.
Unleash intiyo ngomphathi wakho ngeBeat the Boss 4
Sibuyile ngeBeat the Boss 4, umdlalo wevidiyo oya kuthi ukwazi ukuyisusa yonke inzondo eyiveliswa ngumphathi wakho, kwaye ke ususe uxinzelelo kuwe.
I-Adobe Lightroom ihlaziywa ngokudibanisa inkxaso kwi-iPad Pro entsha, i-iPhone XS kunye ne-XR
Emva kokuthandwa kakhulu, iAdobe ihlaziya igumbi elikhanyayo le-iOS ukufumana inkxaso kwiPad Pro entsha kunye nePensile entsha yeApple.
I-Beddit iyeka ukuvumelanisa idatha nge-iCloud
Isicelo seBeddit esisebenza kunye nesixhobo sokujonga ubuthongo, siyekile ukubonelela ngenkxaso yokugcina iikopi zedatha kwilifu.
ICortana ye-iOS ivuselela ujongano lwayo ngokupheleleyo
Isicelo sikaMicrosoft esincedisayo, uCortana, we-iOS usandula ukufumana ukuphakama okukhulu, ehlaziya ngokupheleleyo ujongano kunye nokwenza ukuba lubenomdla ngakumbi.
ICastro 3.2 ngoku iyafumaneka ngeendaba ezinomdla zeSideloads
UCastro uyaqhubeka nokuphucula, kwaye ngohlaziyo lwamva nje siza kuba nakho ukongeza iifayile zeaudiyo ngqo kwi-Safari ngonqakrazo olumbalwa.
I-Twitter yongeza amacandelo kukhetho lokukhangela
Isicelo se-Twitter siqale ukubonelela ngolwazi lomsebenzi wokukhangela ohlelwe ngokwamacandelo.
Iphepha lokuzoba iPhepha lamaFiftyThree eliHlaziyiweyo ukuze lithathe iNkqubo yeZinto eziNtsha kwiPensile yesi-2
Ukuzoba iphepha elinamashumi amahlanu anesithathu kunye neapps kutshanje kuhlaziyiwe ukuxhasa uphawu lwempompo kabini yeApple Pensile 2
Isixhobo esilandelayo esiza kubandakanywa nguFortnite siya kuba yinto eyiphupha yokwakha
Isixhobo esilandelayo esiza kubandakanywa ngu-Fortnite kuhlaziyo lwayo olulandelayo iya kuba sisixhobo esibekwe kwisiseko, isixhobo esifanelekileyo sokudiliza izakhiwo zotshaba ngokukhawuleza.
Inkqubo yeNetflix ihlaziywa ukuze ilingane nescreen sePad Pro entsha
Isicelo seNetflix, inkonzo ekhokelayo kwihlabathi kwicandelo levidiyo eshukumayo, sele ihlaziywa nje ukuze ihambelane nesisombululo sePad Pro entsha.
ICloudflare ivula usetyenziso lwayo lwe-1.1.1.1 ukwenza kube lula ukutshintshela kwi-DNS yakho
Abafana baseCloudflare bafuna ukuqhubeka nokusiqinisekisa nge-DNS yabo yangasese (1.1.1.1) nge-app entsha eyenza kube lula ukutshintsha i-DNS kwi-iOS.
Horizon Chase-Ukhenketho lweHlabathi, umdlalo wangoku kunye nowe-retro ngaxeshanye
Horizon Chase-Ukhenketho lweHlabathi, umdlalo ngobuchule obukhoyo kunye nemizobo ehlonipha ukuqhuba kweArcade ebomini.
Amaphepha kunye neGarageBand zihlaziywa zongeza imisebenzi emitsha
Zombini ii-app zokudala umculo, iGarageBand, kunye neWork suite, zihlaziyiwe ukongeza amanqaku amatsha kunye nokuzinza kunye nokuphuculwa kokusebenza.
iMovie ihlaziywa evumela ukuba sisebenzise iliso langaphandle ukujonga kuqala ividiyo
Uhlaziyo lwamva nje lweMovie lusivumela ukuba siqhagamshele i-iPhone yethu okanye i-iPad ekubekeni esweni kwaye ukhethe oko sifuna ukuboniswa kwiscreen.
Ukuhlaziywa kwe-Twitterrific kunye ne-Tweetbot ukuze kulingane isikrini esitsha se-iPad Pro
Abaxhasi babini be-Twitter be-iOS, Tweetbot kunye ne-Twitterrific sele ihlaziyiwe ukuze ihambelane nezikrini zePad Pro entsha.
Inkqubo yeeVenkile zika-Apple ihlaziywa ngokudibanisa inani elikhulu lezinto ezintsha
U-Apple usandula ukukhupha uhlaziyo olutsha kwisicelo se-iOS esibizwa ngokuba ziiVideos, esongeza inani elikhulu lemisebenzi emitsha, imifanekiso yeselfie, izitikha ...
Amaqabane angama-Fortnite kunye ne-NFL kwaye aya kongeza iyunifomu yeqela leligi
Ukuqala ngo-Novemba ngo-10, iimpahla zomdlali zeNFL ziya kufumaneka eFortnite, ngokuthenga ngaphakathi nohlelo.
Uhlaziyo lweNike + Run Club unikezela ngenkxaso yeeNgcebiso zikaSiri
Enkosi kwisicelo seKlabhu yeNike + Run, kwaye emva kohlaziyo lokugqibela, uSiri uya kuncoma elona xesha lilungileyo lokubaleka
I-Kingdom Rush Impindezelo, eyona nkqubo yoKhuselo ilungileyo ibuyayo nge-22 kaNovemba
Omnye wemidlalo ebalaseleyo kwicandelo lakhe ubuyile, uKing Ruch Vengeance, ofumaneka nge-22 kaNovemba nge-iPhone nakwi-iPad
IBlizzard iqinisekisa ukuba uDiablo uza kwi-iOS ngeDiablo Immortal game
Abafana baseBlizzard babhengeza ukufika kweyona RPG idumileyo yexesha lonke kwi-iOS: IDiablo Immortal.
Ukufowuna kweQela kobuso akusebenzi kuzo zonke ii-iPhones kunye nee-iPads ezihambelanayo ze-iOS
Iifowuni zeqela ezinamaqela angama-32 ngeFaceTime zifumaneka kuphela kwi-iPhone 6s kunye ne-iPad Air 2 kunye ne-iPad Mini 4.
Isicelo seendlela ezimfutshane sihlaziywa ngokongeza iintshukumo ezinxulumene nemozulu
Ngokukhutshwa kwe-iOS 12.1, abafana abavela eCupertino basebenzise ithuba kwaye bakhupha uhlaziyo olutsha kwisicelo seendlela ezimfutshane.
Umxhasi weposi ye-Outlook uhlaziywa ukuze uhambelane nescreen se-iPhone XS Max kunye ne-iPhone XR
Ukuba ujonga isicelo sokulawula ii-imeyile zakho ezivela kwi-iPhone, iMicrosoft Outlook lolunye uhlobo olufanelekileyo onokucinga ngalo.
Guqula isisombululo seefoto zakho ngokulula kwiCropTop
Ukutshintsha ubungakanani / isisombululo semifanekiso esiyithandayo ukuba siyisebenzise kumaxwebhu akukaze kube lula ngesicelo seCropTop.
IPod yasekhaya vs. IAmazon Echo, ubuso ngobuso
Sibeka i-HomePod kunye neAmazon Echo kuvavanyo, entloko ukuya entloko, ukubona ukuba yeyiphi kwaba bancedisi bobabini ikrelekrele, uSiri okanye i-Alexa.
Le yindlela ezisebenza ngayo ii-WhatsApp Stickers ezintsha
I-WhatsApp sele ikuvumela ukuba uthumele kwaye ufumane ii-Stickers kwaye sikunika zonke iinkcukacha malunga nokuba le nto intsha isebenza njani kwi-iPhone yethu.
Kusemthethweni ngoku, uWhatsApp uqinisekisa ukufika kwezincamathelisi kwisicelo sayo
Abafana abavela kuWhatsApp baqinisekisa ukufika kwezincamathelisi kwisicelo esinokubakho kwezincamathelisi ezivela kubaqambi besithathu.
I-PUBG ikwahlaziywa ukubhiyozela iHallowen ngemowudi yasebusuku, izixhobo ezitsha kunye nezithuthi
Eyona Battle Royale iyinyani esinokuyifumana kwiVenkile yeApple, iPUBG Imfono, sele ihlaziywa nje idibanisa ii-Halloween motifs, izixhobo ezintsha kunye nezithuthi.
Uhlaziyo lwe-Fortnite ukubhiyozela iHallowenen yongeza iZombi kunye nezixhobo ezitsha
Owona mdlalo uphumeleleyo kwiVenkile yeApple yeApple, kwaye phantse kwihlabathi liphela, iFortnite ihlaziyiwe ukubhiyozela iHallowen.
Umphathi wenqwelomoya, isimemo somoya esimnandi kakhulu
Umphathi wenqwelomoya, umdlalo wevidiyo wokulinganisa okwimimandla ephezulu ye-iOS yasimahla yokubetha.
I-Facebook izokwazisa uMthunywa omtsha 4 kungekudala ngokuhamba ngokulula kunye nemowudi emnyama
Abafana kuFacebook abancami kwaye bazokwazisa uMthunywa omtsha 4 ngoyilo olulula kunye nemowudi entsha emnyama.
I-WhatsApp ihlaziywa ngonxibelelwano olutsha kwimiyalezo kunye nenkxaso ye-iPhone XS Max
Inkqubo yemiyalezo kaWhatsApp ihlaziyiwe ibonisa ujongano olutsha xa kuziwa ekuboniseni iindlela ezikhoyo zokunxibelelana nemiyalezo
I-Tweetbot 5 ifika ne icon entsha kunye nemowudi emnyama ngeflegi
Ngoku i-Tweetbot 5 ifikile i-icon ehlaziyiweyo kunye nemowudi emnyama njengeyona nto iphambili, ngaba kuya kwanela ukugcina uluntu ngaphandle kokulahleka kokusebenza?
I-Spotify ihlaziywa ngokudibanisa amanqaku amatsha ababhalisile
Uhlaziyo lwamva nje lweSpotify luphucula kakhulu inani lezinto ezinokukhethwa zihlawulwe ngababhalisi beli qonga ukuza kuthi ga ngoku.
I-Pokémon entsha iza kwiPokémon GO
Ngokwenyani oko kwasungulwa umdlalo wePokémon GO, owenziwe nguNiantic kwaye uNintendo ungumnini wamalungelo, kuye ...
Inkqubo yeNike + Run Club ngoku iyahambelana neApple Watch Series 4
Isicelo seNike + Run Clu esenzelwe iimbaleki, sihlaziyiwe nje ukuze sihambelane nobukhulu bescreen seApple Watch 4
Ipokotho ihlaziywa kwaye ilawula ukufunda amanqaku esiwagcinileyo
Sifunde kamva, isicelo sePocket sihlaziyiwe ngokongeza umsebenzi onoxanduva lokufunda amanqaku esiwagcinileyo kwiakhawunti yethu.
I-Sygic GPS navigator isungula uhlaziyo oluvumela ukusetyenziswa kwayo neApple CarPlay
Abafana abavela eSygic ekugqibeleni baqalise ukuhambelana kwe-GPS yabo yokukhangela kunye nenkqubo yeCarPlay yeApple ukuze siyisebenzise emotweni.
I-Facebook ngoku iyasivumela ukuba sithathe iifoto ze-3D kunye neefoto esizithatha kwimowudi yemifanekiso
Iifoto ze-3D zifikelela kwinethiwekhi yoluntu kuFacebook. Sebenzisa iifoto zakho ezithathiweyo ngemowudi ye-portrait ukubona ukuba zihamba njani eludongeni lwakho.
Iifoto zikaGoogle zisivumela ukuba senze ii-albhamu zabantu kunye nezilwanyana ngokuzenzekelayo
Uhlaziyo lwamva nje lweefoto zikaGoogle ze-iOS, zisenza sikwazi ukwenza iialbham nabantu kunye nezilwanyana zasekhaya ngokuzenzekelayo ngaphandle kokongeza ii-captures ezintsha esizithathayo.
IStardew Valley iza kwiVenkile yeApple ngaphandle kweentlawulo ezihlanganisiweyo
Abaphuhlisi beRPG ekhethekileyo ebizwa ngokuba yiStardew Valley bagqibe kwelokuba basungule umdlalo wabo wevidiyo ngentlawulo enye kwaye ngaphandle kwemicimbi emincinci kwiVenkile yeApple yeApple.
Ukulungiswa kweApple kukhutshwa apho iipodcast ezikalwe phezulu zaziboniswa ngokungachanekanga
Idatha yezona podcasts ziphulaphulwayo kunye nezikhutshelweyo kwiPodcast ka-Apple ziye zagqwethwa ngesizathu esithile, zibonisa idatha ekude nenyani.
I-Evoland, i-RPG emnandi ngesaphulelo esikhohlakeleyo
I-Evoland, le RPG iqhubela phambili ukusuka kokuncinci ukuya kokubi ihlala kwixabiso elihlekisayo elenza ukuba liphantse ukuba lithengwe.
IPixelmator ngoku iyahambelana ne-iOS 12
Umhleli wesithombe sePixelmator, kuhlobo lwayo lwe-iOS, sele ihlaziywa nje ukuze ihambelane ngokupheleleyo ne-iOS 12
Ungazithumela njani iividiyo ngeWhatsApp kwifomathi yeGIF
Ukuguqula ividiyo kwifomathi ye-GIF ukuyiguqula nge-WhatsApp yinkqubo elula kakhulu engadingi usetyenziso lweqela lesithathu
Ingeniso ye-Fortnite ifikelela kwizigidi ezingama-300 zeedola kwi-iOS
Umdlalo wefashoni kwi-iOS useyi-Fortnite, njengoko kungqinwa yidatha yengeniso eveliswe sisicelo oko yasungulwa.
Impucuko VI iza kwi-iPhone kwaye uyibhiyozela ngezaphulelo ezinamanzi
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, iSin Meier's Impucuko VI yakhutshelwa i-iPad, nangona kunjalo, ngoku ivula ingxelo ye-iPhone kwaye iyibhiyozela ngezaphulelo.
Iibhalbhu zePhilips Hue ngoku zixhasa iindlela ezimfutshane zikaSiri
I-Philips Hue bulbs smart ngoku ixhasa iindlela ezimfutshane zikaSiri emva kohlaziyo lwe-iOS.
Ifantastical 2 ihlaziyiwe yongeza inkxaso kwiindlela ezimfutshane zikaSiri, ukuhambelana ne-iPhone XS Max kunye no-4
Inkqubo emnandi yolawulo lwekhalenda yesi-2 isandula ukuhlaziywa ukuze isebenzise into entsha kwi-iOS 12
YENZA, usetyenziso oluya kukhathalela eyakho
I-APP entsha i-ACÉRCATE yi-EULEN ikuvumela ukuba ukhathalele abo bayifuna kakhulu kwi-smartphone yakho, usazi indawo yabo kwaye ufumana izilumkiso.
Uhlelo lokusebenza lwe-Twitter longeza umsebenzi omtsha ukugcina idatha yeselfowuni
Isicelo esisemthethweni seTwitter sihlaziyiwe ukuphucula useto lokusetyenziswa kwedatha ngokubhekisele ekudlaleni ividiyo.
Uwavula njani amakhonkco e-YouTube kwiChannel hayi kwi-Safari
Ukuba ungumsebenzisi othembekileyo wezicelo zikaGoogle, apha ngezantsi siza kukubonisa indlela yokuvula amakhonkco e-YouTube ngokuthe ngqo kwiGoogle Chrome
Ngoku ungathumela ii-GIFs nge-MD kwi-Instagram
Ngoku uhlaziyo lwamva nje luzise ii-GIFs ekuthumeleni imiyalezo, nangona le miyalezo ingakhange ithandwe kakhulu.
I-Opera Touch ifuna ukuba ushiye iChannel kunye neSafari kwi-iPhone yakho
I-Opera isungula i-Opera Touch, isikhangeli esitsha esifuna ukukhuphisana nentloko neNtloko ngeSafari ye-iPhone kunye nemisebenzi enjengokuhamba ngesandla esinye
Ngaphandle kokukhula kweApple News, ingeniso yabavakalisi ihleli incinci
Iqonga leendaba lika-Apple, iApple News, ihlala ingumthombo obonakalayo wengeniso yabapapashi abanikezela amanqaku abo.
Abaphuhlisi be-IOS ngoku kulula kakhulu ukuhambisa ii-betas zabo
Ukuhambisa ii-bets ze-iOS ngoku kungumbulelo olula kakhulu kumandla abaphuhlisi ekwabelaneni esidlangalaleni amakhonkco okhuphelo
I-Layton: Ilali engaMangalisa, ngoku iyafumaneka kwi-iPhone kunye ne-iPad
Ukuba ufuna ukonwabela umdlalo wokuqala woluhlu lweLayton kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad kwakhona, ungagqibela uyenzile.
Ekugqibeleni u-Apple ugqibezela ukuthengwa kweShazam emva kokulunga kweManyano
Emva kogunyaziso lwekhomishini yokhuphiswano lwe-EU, iApple igqibezela ukuthengwa kwenkampani uShazam ngenjongo yokubandakanya yonke itekhnoloji.
Umlutha kwi-Fortnite, esinye sezizathu zokuqhawula umtshato ngokweedatha zamva nje
Umlutha wokuba abanye abantu bahlupheke kumdlalo wevidiyo weFortnite, sele uqalile ukuba sisizathu sokonwaba eUnited Kingdom.
Umxhasi weposi ye-Spark uhlaziyiwe ukuze asebenzise izinto ezintsha ze-iOS 12
Umxhasi we-imeyile ye-Spark usandula ukuhlaziywa ukuze asebenzise ezinye zezinto ezintsha ezivela kwi-iOS 12
IGarajiBand, iNkxaso yeApple kunye neTV ekude ziyahlaziywa ukuze zihambelane ne-iOS 12
Ezintathu zezicelo ezisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi be-iOS, iGarageBando, iNkxaso yeApple kunye neTV kude ziye zahlaziywa nje ukuba zibe yi-100% ehambelana ne-iOS 12.
Iimephu zikaGoogle ekugqibeleni ziyayixhasa iCarPlay
Emva kweminyaka eliqela yokulinda, isicelo seMaphu zikaGoogle ngoku siyafumaneka kwiCarPlay. Inkqubo elandelayo yokwenza imephu yokwenza njalo iya kuba yiWaze.
Isicelo seTelegram siya kutshintshwa yiTelegram X, usetyenziso olunokusetyenziswa okungcono kwebhetri kunye nokusebenza
Kwiiveki ezimbini, njengoko kuchaziwe yintloko yeTelegram, uPavel Durovx, iTelegram X iya kuthatha indawo yeTelegram.
I-1Password ine-vitaminized ngokufika kwe-iOS 12 kwizixhobo zethu
Iqela le-1Password labaphuhlisi likhuphe uhlaziyo olutsha lokudibanisa nazo zonke iindaba ezikhutshwe ngu-Apple kwi-iOS 12.
Uhlaziyo lweWork lokuthatha iArhente yeNtsha kwi-iOS 12
Iofisi ka-Apple ye-iOS, iWork, ihlaziyiwe nje ukubonelela ngokuhambelana nezinto eziphambili ze-iOS 12
I-Chrome ye-iOS ifumana ukuphakama kobuso obukhulu kunye neempawu ezintsha
Isikhangeli seGoogle sikaGoogle sihlaziyiwe songeza amanqaku kunye nokuphucula ezinye esele sizinikile.
UGoogle ubhengeza ukuvalwa kwe-Inbox kunyaka olandelayo
Emva kweenyanga ezininzi zamarhe, uGoogle ubhengeze ngokusesikweni ukuba izakuyeka ukubonelela ngenkonzo nge-Inbox ngo-Matshi 2019.
I-iPhone XS kunye ne-XS Max: onke amanqaku, amaxabiso kunye nokufumaneka
Ukuba awukaqiniseki ukuba yeyiphi imodeli entsha ye-iPhone ehambelana neemfuno zakho, apha ngezantsi sikubonisa onke amanqaku, amaxabiso kunye nokufumaneka kweemodeli ezintsha ze-2018.
I-Apple iyaqhubeka nokukhuthaza ukusetyenziswa kwemali phakathi kwabaphuhlisi
Abafana abavela eCupertino bathumele ividiyo entsha kwiportal yonjiniyela ebonisa ukubaluleka kokubhaliselwa kwabo.
Ezi ziindaba eziphambili zohlaziyo olulandelayo lwePUBG Mobile
Kwiinyanga ezimbalwa, sinazo kwiVenkile yeApple usetyenziso oluguqule ubume bemidlalo yevidiyo ephathekayo. Uhlaziyo olulandelayo lwePUBG Mobile, noluya kubakho ngomso imini yonke, luya kusinika iindaba ezibalulekileyo ezifana nemephu entsha, izithuthi kunye nezixhobo.
Imidlalo ye-Epic ibanga ukuba bayasebenza ukuphucula ukusebenza kwe-Fortnite kwi-iOS
Kwiinyanga ezidlulileyo, siyibonile indlela i-Fortnite esemilebeni yomntu wonke, kubandakanya neendaba, zombini ezilungileyo nezesandla. I-Fortnite Uhlaziyo lwamva nje lwe-Fortnite lwe-iOS, lubonelela ngokuhla kwendlela yokusebenza eye yakhupha umsindo kubadlali abaninzi.
UApple ufuna ukuqhubeka nokuphucula iindaba kwaye aqeshe umphathi wangaphambili weCondé Nast
Kwinyanga ephelileyo kaMeyi, saphinda savuma amarhe okuba iApple ingathenga uCondé Nast, amarhe akhawulezileyo aba ngaphandle kokuba ukwanda kweendaba kwamanye amazwe kuyaqhubeka nokukhubazeka, inkampani esekwe eCupertino iyaqhubeka nokongeza izinto ezintsha.
Uhlaziyo olutsha lwe-WhatsApp olukuvumela ukuba ujonge imifanekiso kwizaziso
Uhlaziyo lweWhatsApp luvumela ukhetho lokujonga iifayile zemultimedia ezithunyelwa kuthi zivela kwisaziso
Uyenza njani imowudi emnyama kwiYouTube
Imowudi emnyama sele ikho, ukusungulwa kwe-iPhone X ngescreen se-OLED, enye yezinto eziphambili kubasebenzisi abaninzi xa kusebenze ubumnyama kwiYouTube yinkqubo elula kakhulu eya kusivumela ukuba sigcine isixa esikhulu sebhetri ukuba senza Ukusetyenziswa rhoqo kwale app.
Uvavanyo lwe-Twitter inkqubo entsha yemiyalezo eneempawu zomsebenzi
I-Twitter ikwafuna ukujoyina usetyenziso lwemiyalezo kwaye ivavanya ujongano olutsha olunezikhombisi zobume.
UDragalia Lost nguNintendo omtsha we-iPhone kwaye uza kufika ngoSeptemba 27
INintendo iqinisekisa ukufika kwe-RPG ngedayi yaseMpuma, uDragalia Lost, kwii-iDevices zethu nge-27 ezayo kaSeptemba.
I-Apple iya kubonelela ngemizuzu engama-30 yeeseshoni zobuqu ukuze sifunde ukuhlela iifoto zethu kwi-iPhone yethu
Abafana abavela eCupertino baqala ukubonelela ngemizuzu engama-30 e-United States ukuze bafunde ukuhlela iifoto kwi-iPhone yethu.
Sala kakuhle kwi-Onavo yasentsomini, u-Facebook uhamba ngehuphu ka-Apple ngokurhoxisa isicelo sayo
Abafana abavela kuFacebook bathatha isigqibo sokuphelisa i-Onavo VPN yabo, ngenxa yoko bayayiqonda ingqokelela abayenzileyo yedatha yethu kunye neapp.
INetflix ifuna ukuyeka ukuhlawula iApple ngokubhalisela inkonzo yayo kwiVenkile yeApp
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, abafana baseCupertino babhengeza utshintsho kwimodeli yobhaliso, imodeli ethi, ukuqala kunyaka wesibini, inciphise inani lesigebenga sokusasaza sele siqale ukuyeka ukuvumela abasebenzisi ukuba babhalisele iNetflix ngokusebenzisa iApp. yeOS.
I-1Password idityaniswa nokugcwaliswa okuzenzekelayo kwi-iOS 12
I-1Password iya kudityaniswa ngaphandle komthungo nenkqubo njenge-iOS 12 kwaye siya kuba nakho ukugcwalisa amagama ethu kunye neephasiwedi ngokulula.
Lungiselela ukubuyela eklasini ngezi zicelo zintle ze-iPhone, i-iPad kunye neMac [SWEEPSTAKES]
Siqokelela ezona zicelo zibalaseleyo zemveliso onokuzifumana ukulungiselela i-iPhone kunye ne-iPad yakho yokubuyela eklasini.
I-Spotify yongeza ithala leencwadi le-BBC Podcast kwikhathalogu yayo
Emva kokufika kweDeutsche Grammophon kwiApple Music, uSpotify ubhiyozela ukufika kwayo yonke ikhathalogu ye-podcast ye-BBC kumnikelo wayo wePodcast.
Ukuba ungomnye wabo bangayihlawuliyo iSpotify ungatsiba iintengiso ezicaphukisayo ngaphandle kwemida
I-Spotify icwangcisa utshintsho olukhulu kwimowudi yayo yasimahla evumela umsebenzisi ukuba atsibe iintengiso ezidlalwa phakathi kuluhlu lokudlalwayo.
Ingqalelo! Imiyalezo ye-WhatsApp inokusetyenziswa gwenxa ngaphakathi kwincoko
Inkampani yase-Israeli yokhuseleko lwe-cyber ngeyifumene ibug eya kusivumela ukuba siguqule imiyalezo ye-WhatsApp kulo naliphi na iqela esinalo.
Umpu ophindwe kabini, ngoku uyafumaneka kuhlaziyo lwamva nje lweFortnite
I-Fortnite kunye ne-PUBG ibe yeyona midlalo inike ezona ntetho zininzi ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, kuba zisinika amava amatsha kumdlalo wefashoni kuwo onke amaqonga, iFortnite, usandula kufumana uhlaziyo olutsha olongeza izixhobo ezitsha kunye nolawulo oluphuculweyo lokudubula.
I-Gmail ye-iOS iya kusivumela ukuba sisebenzise amaqela e-imeyile kwincoko
Njengokuba iminyaka idlulile, inani lezikhetho ezinikezelwa ziinkonzo ezahlukeneyo zeposi kunye nokusetyenziswa ukulawula i-imeyile yethu, umxhasi wemeyile ye-imeyile ye-iOS uya kusivumela kwiintsuku nje ezimbalwa ukukhubaza ukudityaniswa kwee-imeyile ngeencoko, nangaphezulu Inguqulelo yedesktop.
Gcina isiphelo sakho se-smart 'seKhaya' kunye noMlawuli weNkqubo yeKhaya eKit
Ngaba udikwe kukuchitha ixesha ubuyisela useto lweKhayaKit? Umlawuli weKhayaKit usizisela i-backups ekudala zilindelwe ukuze singalahli nto.
I-Pokémon GO ilungiselela ukongeza amadabi ekudala elindelwe phakathi kwabadlali
Abafana baseNiantic banokusizisela imo yokulwa elindelekileyo yePokémon GO enokufika ekupheleni konyaka ukuvuselela ukhuphelo lomdlalo.
I-PUBG yongeza inkxaso kubalawuli bemidlalo kuhlaziyo lwayo lwamva nje
Amakhwenkwe ePUBG ahlaziya usetyenziso lwawo lwe-iOS ongeze inkxaso kubalawuli bemidlalo yeklasikhi yezixhobo eziphathwayo.
I-Plex ye-iOS ihlaziywa ngokudibanisa iindaba ezinxulumene neepodcast
Abafana basePlex bongeza ithuba lokukhuphela iipodcast kwi-app yabo ye-iOS, ukuze sikwazi ukukhuphela iipodcasts zethu esizithandayo kwaye sibamamele ngaphandle kwenethiwekhi.
Amagqabantshintshi oMlilo oMlilo avelise ngaphezulu kwe- $ 400 yezigidi zeNintendo kwizixhobo eziphathwayo
Umdlalo wokuqala ovela kwinkampani yaseJapan iNintendo kumaqonga eselfowuni yayinguMario Run, umdlalo ongakhange uvelise izinto ezazilindelwe ekuqaleni.Impumelelo enkulu kaNintendo okoko yafika kumaqonga eselfowuni iyaqhubeka nokuba iya kuba ngumfuziselo woMlilo ixesha elide.
Molo mmelwane ngumdlalo wobusela nowoyikekayo oza kukuonwabisa
Molo mmelwane bubumnandi obuza kusigcina sixinene, kufuneka singene kwindlu yommelwane ngaphandle kokufunyanwa.
Iphepha leDropbox lihlaziywa liphucula amanqaku alo
Uhlaziyo olutsha lwePhepha leDropbox longeza amanqaku ngokwezifiso kwiAdobe Illustrator PDF kunye nokujonga iifayile.
Iimaphu zikaGoogle ziya kusixelela ukuba zeziphi ezona ndawo zokutyela zibalaseleyo ngokokuthanda kwethu
Ihlobo, ngakumbi xa sikwiholide, ihlala ilixesha lonyaka xa sisebenzisa zombini iiMaphu zeApple kunye noGoogle Iimephu kakhulu, nangona kuhlaziyo lwakutsha lweMaphu zikaGoogle, ziya kusivumela ukuba sazi ngokukhawuleza ukuba zeziphi ezona ndawo zokutyela zibalaseleyo indawo elingana neencasa zethu.
I-Asphalt 9: Iintsomi, ngoku ziyafumaneka kwiVenkile ye App
Isaga ye-Asphalt iye yaba yenye yezona zidumileyo esinokuzifumana namhlanje kwizixhobo eziselfowuni. Ngelixa kuyinyani ukuba ayisiyi-Asphalt 9: Iintsomi, iGameloft eyaziwayo yokubaleka iimoto, ngoku iyafumaneka simahla.
U-Apple upapasha ividiyo entsha ebonisa amandla e-iPhone X
Xa zingaphantsi kweenyanga ezimbini ukuba sibone isizukulwana esilandelayo se-iPhone, abafana baseCupertino, basungule umatshini u-Apple usinika isibhengezo esitsha apho sinokubona khona amandla anikezelwa yiprosesa ye-A11 Bionic
Inkqubo yeVenkile yeApple ihlaziywa ngonxibelelwano olutsha
Kwiminyaka yakutshanje, inkampani esekwe eCupertino izamile ukutshintsha indlela abasebenzisi abasebenzisana ngayo nenkampani, ngakumbi isicelo seVenkile yeApple, ifumene nje uhlaziyo olutsha apho inkqubo iphuculwe khona.ukukhangela ngelizwi kunye nomsebenzisi ujongiwe kancinci .
Ukujonga kwesitalato sikaGoogle ngoku kuyahambelana nesikrini se-iPhone X
UGoogle usandula ukukhupha uhlaziyo olutsha kwisicelo seGoogle Street View, uhlaziyo olwenza ukuba ekugqibeleni luhambelane nescreen sesicelo seGoogle sokugqibela esihlaziyiweyo ukuze sihambelane nescreen se-iPhone X yiGoogle Street View.
INetflix yongeza ngaphezulu kwe-100 yeempawu zeeprofayili ezintsha kuthi ukuze senze ngokobuqu ubhaliso lwethu
Mhlawumbi sele uqaphele, iNetflix ihlaziye ii-icon zeeprofayili esizenzayo ngokongeza inani elingenasiphelo labalinganiswa abadumileyo.
Imowudi yemfazwe ngoku iyafumaneka kuhlaziyo lwamva nje lwePUBG
Nangona wonke umntu ethetha ngeFortnite, abo kuthi baneminyaka embalwa, eyokwakha xa beqala ukudubula ukusikhusela, ngokungathi ayilindelanga Imfazwe, iyafumaneka kuhlaziyo lwePUBG lweSelfowuni
Ezona zixhobo zefoto zokuhlela okwangoku
Sikubonisa ezona zicelo zintathu zinamandla zokuhlela iifoto ngalo mzuzu kwiVenkile ye App: iPixelmator, i-Darkroom kunye nokuKhanya.
ISygic ibonisa ukusebenza kweapps yayo kwiApple CarPlay
I-Sygic yeCarPlay yinyani, abafana abavela kwisikhangeli esidumileyo basibonisa kwividiyo ukuba isikhangeli sabo siza kusebenza njani kwiCarPlay yethu.
Okwenyani okwandisiweyo kuza kwiapp yeAmazon ukusinceda ngezinto ezincinci
IAmazon ibandakanya ukumiliselwa kwento yokwenyani kwesicelo esiya kuthi sivumele ukuba sichonge kwaye sithenge izinto ezincinci ezinje ngezikrufu
Inkqubo yeBanco Santander ihlaziywa ngeendaba ezinomdla
Isicelo seBanco Santander, isicelo esinokuphucula okuninzi kwaye esibonakala ngathi simamele iimfuno zabathengi, siza kukuxelela iindaba.
Isikhumbuzo se-Monument Valley 2, isavenge ekudala silindelwe, eshiye kunqweneleka
Ufakelo lwesibini lweMonument Valley 2 lubetha iVenkile yeApp. Iyaqhubeka ukuthandana kodwa iyasilela ukweyisela abasebenzisi ngokungxamisekileyo njengesavenge sokuqala.
Iividiyo ezingama-360-degree ngoku ziyahambelana neapp yeVLC
Uhlaziyo olutsha lwe-VLC lulungisa iingxaki ezininzi kwaye lwenza ukuba luhambelane neevidiyo ezingama-360 kunye neChromecast kaGoogle.
I-Apple isusa udidi lwe-Doorbell kuluhlu lwezixhobo zeKhayaKit
Abafana baseCupertino bagqiba kwelokuba babuye umva ngokususa iithowuni zemithambo kuluhlu lwezixhobo ezihambelana neKhayaKit.
Ivenkile yeeVenkile zeVenkile kunye noVavanyo lweFlight luhlaziywa ngophuculo kunye nemisebenzi emitsha
I-Apple yenza ukuba iinkqubo ezahlukeneyo zifumaneke kubaphuhlisi ukuze bakwazi ukwenza, hayi ukulandela nje usetyenziso abanale App Store Connect kunye neTestFlight izicelo ezifumene uhlaziyo olwahlukeneyo lokwandisa inani leenkonzo abazinikezela kubaphuhlisi.
Ingeniso evela kwiVenkile yeApple iphindwe kabini eveliswe yiVenkile yokuDlala kuGoogle
Iivenkile zesicelo ziye zaba zezona ziphambili, kwaye ngamanye amaxesha ekuphela kwendlela yokufaka usetyenziso kwinkqubo yokusebenza. Usetyenziso Ingeniso eveliswe kwivenkile yesicelo yeApple iphindwe kabini eveliswe yiVenkile yeGoogle yokuDlala kwiinyanga ezintandathu zokuqala zika-6
I-Instapaper, iba nokuzimela kwaye ayiseyonxalenye yePinterest
Kwiminyaka yakutshanje, i-Instapaper iye, kunye ne-Pocket, ezona nkonzo zimbini zigcina amakhonkco kwaye ke zikwazi ukuzifunda ungaxhunyiwe kwi-intanethi. qala ukusebenza ngokuzimeleyo, njengakwimvelaphi yayo.
I-Amerigo, usetyenziso lokukhuphela naluphi na uhlobo lomxholo kwi-iPhone kunye ne-iPad, luhlaziya ujongano lwayo kwaye longeza imisebenzi emitsha
Isicelo seAmerigo, ongomnye wabaphathi abaphambili bokukhuphela i-iPhone kunye ne-iPad, uyihlaziye ngokupheleleyo imbonakalo yayo kwaye wongeza imisebenzi enomdla.
Ujoliso lweFirefox luhlaziywa ngokudibanisa imisebenzi efunwa ngabasebenzisi
Uhlaziyo lwamva nje lwesikhangeli esigxile kubucala seMozilla Foundation, iFirefox Focus, isivumela ukuba sikhangele iiwebhusayithi esizindwendwelayo
Ezi zezonaapps zidumileyo kwiminyaka eli-10 yeVenkile yeApple
I-Facebook Messenger, i-Minecraft, kunye ne-WhatsApp ziphezulu kuluhlu lweeapps ezithandwa kakhulu kwiVenkile ye App kwi-XNUMXth anniversary.
I-Chirp ye-Apple Watch yongeza izinto ezintsha ezinje ngokudlala kwakhona kwee-GIF
Ii-GIFs phakathi kwezinye izinto ezinqabileyo azinakuphuthelwa kwiChirp, esinye sezona zicelo zibalaseleyo zokuba sikwazi ukusebenzisa i-Twitter kwiApple Watch yethu.
Indawo yokudlala yaseFortnite inyamalala nge-12 kaJulayi, kodwa iya kubuya
NgoJulayi 12, imowudi yokudlala iya kunyamalala, kwakhona, ukusuka kwi-Fortnite, kodwa iya kubuya nezinye iinketho kunye nemisebenzi emitsha kungekudala.
INewton ihlaziywa ngeendaba kunye namanqaku kunyuko lwamaxabiso
INewton ineendaba ezintsha, izakongeza inqaku elitsha elibizwa ngokuba yiRecap kwaye ithathe nethuba lokunyusa ixabiso lemirhumo.
UGoogle uhlaziya usetyenziso lwe-Inbox ukuyenza ihambelane ne-iPhone X
Uhlaziyo ekudala lulindelwe kwi-inbox app ye-iPhone X ngoku iyafumaneka kwiVenkile ye App.
USygic uqinisekisa ukufika kwakhe kwiCarPlay nge-iOS 12
Inkqubo yokuhambisa inqanawa ye-GPS, iSygic, iyaqhubeka ukubonisa ukuba izakusebenza njani ngeApple CarPlay entsha kunye ne-iOS 12.
I-Telegram ivumelanisa ne-iOS 12 kwaye yongeza amanqaku amatsha kuhlaziyo lwayo lwamva nje
Ucingo, usetyenziso lwemiyalezo olunemvelaphi yaseRussia luhlaziyiwe kwaye ngoku luyahambelana ngokupheleleyo ne-iOS 12 kunye nokongeza amanqaku amatsha.
Ngaba wabelana ngeakhawunti yeNetflix kunye nabahlobo? INetflix ifuna ukunyusa ixabiso lodidi lwayo 'lweNkulumbuso'
Ngenxa yokwamkelwa okukhulu kwezicwangciso zexabiso lezixhobo ezininzi, iNetflix ngoku ifuna ukwenza ukwanda kwisicwangciso esivumela izixhobo ezine.
Indawo yokudlala eFortnite iyafumaneka kwakhona
Imowudi entsha yeFortite, Indawo yokudlala, iyafumaneka kwakhona emva kokuba inyamalale ngokusesikweni ukusungulwa kwayo
IGarajiBand iyahlaziywa kwaye ngoku ixhasa umsebenzi waseklasini (Umsebenzi wesikolo)
Isicelo samva nje esihlaziyiweyo ukuxhasa umsebenzi wesikolo yiGarageBand ka-Apple.
UGqr Panda: Ifama, isimahla ixesha elilinganiselweyo
Umdlalo wasimahla esikubonisa wona namhlanje nguGqirha Panda: Ifama, umdlalo wabantwana abancinci ukuba babe ngabalimi.
I-LinkedIn ijika iprofayile yethu ibe likhadi leshishini ledijithali
Uhlaziyo lwamva nje lwesicelo se-LinkedIn, esivumela ukuba sabelane ngedatha yethu ngekhowudi ye-QR efundwa sisicelo ngokwaso
I-Apple izokwakha iimephu zayo kwasekuqaleni
I-Apple ibiphucula iimephu zayo iminyaka, kodwa ngoku igqibe kwelokuba iphinde yakhiwe kwasekuqaleni ngalo lonke ulwazi olutsha abalufumene kule minyaka idlulileyo.
I-Alto's Odyssey iyathengiswa okwexeshana
I-Alto's Odyssey iyafumaneka kwi-App ye-Stor Econ ngesaphulelo se-60% sexabiso sayo sokuqala, kodwa iya kuhlala ixesha elifutshane.
Uhlengahlengiso olutsha lwe-iTunes Remote ngoku luyafumaneka kwiVenkile ye App
I-Apple ihlaziye iapps yayo ekude ye-iTunes nalapho kudlalwa khona kwilayibrari yethu ye-iTunes, iyilungelelanisa ne-iPhone X.
I-Instagram ihambisa izitikha zomculo ukuze sizongeze kumaBali ethu
Ngoku sinokongeza umculo kumabali ethu e-Instagram ngokufika kwezitikha zomculo ezintsha ezisandula ukwenziwa yi-Instagram.